मार्केटिंग स्वचालन अवसरहरूको खोजी गर्दै Martech Zone
सोमबार, मार्च 21, 2011 बुधबार, अक्टोबर 16, 2013 Douglas Karr
हामी हाम्रो ग्राहकहरूको प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्न कडा मेहनत गर्छौं। जब तपाईले आफ्नो बजारका प्रयासहरु बारे सोच्न थाल्नुहुन्छ, तपाई वास्तवमै धेरै समय कहाँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ? कम्पनीहरूले प्राय: छुट र महत्त्वपूर्णतालाई समयको तुलनामा कम महत्त्व दिन्छ जुन प्रक्रियाको बिचमा सर्नको लागि लिन्छ। हामी भर्खरै पोष्ट गरिएको सीआरएममा सीसा र टच पोइन्टहरू रेकर्ड गर्न यसले लिने समयको बारेमा - र कार्यले कार्यलाई सरलीकृत गर्ने उत्पादन।
सम्भावनाहरू यो छ कि तपाईंले यो मार्केटिंग प्रयासहरू मार्फत दिनभर गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईंले यसलाई महसुस पनि गर्नुहुन्न। तपाईका अनुयायीहरूलाई ट्वीट पठाउन जत्तिकै सजिलो कुरा पनि नम्र लाग्न सक्छ ... तर यदि तपाईं एउटा लि include्क समावेश गर्न चाहानुहुन्छ र त्यो ट्विटलाई तपाईंको एनालिटिक्स प्रोग्राममा फिर्ता ट्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई ट्याग वा अभियान पहिचानकर्ताहरू लागू गर्न आवश्यक पर्दछ, तेस्रो-पार्टी मार्फत छोटो। यूआरएल छोटो, छोटो लिंक को परीक्षण ... र त्यसपछि ट्वीट पोस्ट।
यसले भर्खरको एउटा प्रयासलाई केहि प्रयासमा परिवर्तन गर्यो। यदि तपाईं यो कार्य समय पछि दोहोर्याई रहनु भएको छ भने, तपाईं बहुमूल्य समय खान सक्नुहुनेछ। केहि समय लिनुहोस् र यसलाई आफैंमा परिक्षण गर्नुहोस्। अर्को पटक जब तपाईं सामग्री लेखिरहनु भएको छ, डाटा परिवर्तन गर्दै, वा परिणाम विश्लेषण गर्दै ... समय लिनुहोस् जब तपाईं कदमहरू लिनुहुन्छ। तपाईंले पाउनुहुनेछ कि वास्तविक काम गरिरहेको बीचको ट्रान्जिसनहरू भन्दा धेरै कम लिन्छ।
ती ट्रान्जिसनहरू सुनका हुन्छन् र मार्केटिंग अटोमेसन अनुप्रयोगहरूमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, मार्केटिंग अटोमेसनले तपाईंलाई कम स्रोतहरूसँग अधिक गर्न अनुमति दिन्छ। र धेरै पटक, मार्केटिंग स्वचालनले मानव त्रुटिको जोखिम कम गर्न सक्छ! महान को रूप मा रोन पोपिल भन्छ, "यसलाई सेट गर्नुहोस् र यसलाई बिर्सनुहोस्!"
म भन्न को लागी, "त्यहाँ को लागी एक अनुप्रयोग छ!"
टैग: jquery स्क्रोल टपप्रत्यक्ष भिडियोwpengine
कम्पेन्डियमले पोष्ट गर्न ईमेल जारी गर्दछ